Indawo entle eDowntown kwindawo yeLifa leMveli
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGeoff
Ukuphoswa kwamatye kude kumbindi wedolophu wevenkile yabahambi ngeenyawo ehlotyeni!
Yathiywa ngomnini wokuqala uAllan Findlater ngo-1900, "iFindlater's Flat" intle, ingaphezulu kwendlu engaphantsi komhlaba kwikhaya lelifa elibhalisiweyo. Kufuphi kuzo zonke iindawo ezinomtsalane: iSignal Hill, iJelly Bean Row, iQuidi Vidi Lake, iBannerman Park kunye nemizuzu yokuhamba ukusuka kwiindawo zokutyela kunye neGeorge Street. Imizuzwana ukusuka kwiivenkile zekofu zasekuhlaleni & neshishini lemveliso yezandla. Sikufutshane ngokwaneleyo kuyo yonke intshukumo kodwa kwindawo ezolileyo, yokuhlala eyodwa.
Ifakwe kwi-120 leminyaka ubudala elibhalisiweyo kwiKhaya leLifa leMveli, le flethi yalungiswa ngokupheleleyo ngo-Epreli, ka-2019 ukuze wow abanye abahambi abafuna ukonwabela okona kulungileyo kweSt. John's ngaphandle kwamaxabiso okanye ingxaki yeehotele ezinkulu. Siye sayila indawo ukuba sibe nazo zonke izinto esaziyo ukuba siya kuzifuna xa sisendleleni ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kangangoko kunokwenzeka: I-Air Conditioning (Ukupholisa kufumaneka ngeenyanga zasehlotyeni kuphela iyunithi efanayo itshintshelwa kwindlela yokufudumala ukusuka ngoSeptemba ukuya kuJuni) , umatrasi womqamelo, izixhobo ezitsha zentsimbi engatyiwayo, isandla esitsha esakhiwe ngamaplanga aqinileyo, iayini, izinto zokupheka, iitawuli/amalaphu obuso, imicrowave, ikofu, 55" 4K Smart TV enepakethe zokusakaza zikamabonakude (Netflix, Apple TV, Amazon Prime TV, Stack TV ) I-WiFi enesantya esiphezulu, iwotshi ye-alam yebluetooth, kunye nekhitshi eligcweleyo Sikwagcina izinto ezisisiseko ekhitshini ukuze uqalise: ityuwa, ipepile, ioyile yokupheka, iswekile, ikofu/iti, njl. ukutya apha, kodwa ukufutshane kakhulu kwezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo kweli phondo, ungaphambana ukupheka!
Ifakwe kwenye yezona ndawo zintle zaseSt. John's, sihamba ngokwenyani imizuzwana ukusuka kweyona ikofu ibalaseleyo esixekweni kunye neengcango ezimbalwa ukusuka kwindawo entle yeBannerman Brew Pub. Kukho iivenkile ezimbini eziluncedo ezijikeleze ikona yezinto ezisisiseko, kunye nendawo yokuhlamba impahla.
Kukho indawo yangaphandle yokuhlala kwaye wonwabele ikofu okanye iwayini ethile kwindawo ebandayo kunye nomoya wokuphumla kwiinyanga zasehlotyeni.
Sikwabandakanya isepha kunye neshampu, ukuze ukwazi ukupakisha lula kakhulu!
55" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Fire TV, I-Apple TV
Ukude kude neyona ndawo intle yeevenkile zekofu, iBannerman Brewing MicroBrew Pub, ivenkile entsha yegelato, iSignal Hill kunye neBattery yokukhwela intaba okanye ukuthatha nje izinto ezibonwayo. Ngaphaya kweNdlu kaRhulumente kunye neBannerman Park yangaphandle yokutyibiliza irenki kunye neSplash pad kwiinyanga ezishushu. Sikwahamba malunga ne-7 min ukuhamba ukusuka kwibala leRoyal St.
Communications professional who loves to travel and meet new people from all over. Also host an Airbnb in St. John’s and really enjoy meeting fellow travelers and providing an amazing experience in my neck of the woods.
Omnye wethu uya kuhlala ekho apho abulise iindwendwe ukuba kuyenzeka kodwa kuxhomekeke kwixesha lokufika, okanye ukukhetha ukuzihlola ngenxa yezikhokelo zempilo zangoku, iindwendwe zinokufuna ukuzijonga ngokukhetha. Ukuba asikwazi ukudibana nawe xa ungenile, siya kukunika imiyalelo elula yokuzijonga ngokwakho. Sihlala kwindawo kwaye ziyafumaneka xa zifunwa imibuzo okanye imiba, ukuba siyakukhumbula xa singena sizakuqhagamshela ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle. Sobabini singabahambi rhoqo kwaye siyathanda ukunika iingcebiso kunye neengcebiso kwabanye abazula-zulayo beendawo zokuya kunye nezinto ekufuneka zenziwe; Nceda USIBUZE nantoni na, singabatya kwaye siyayithanda ibhiya emnandi ke siyaku *kukuncamathela kwicala elifanelekileyo!
Omnye wethu uya kuhlala ekho apho abulise iindwendwe ukuba kuyenzeka kodwa kuxhomekeke kwixesha lokufika, okanye ukukhetha ukuzihlola ngenxa yezikhokelo zempilo zangoku, iindwendwe…